Kwake kwaba isikhathi, lo genesis - Afrikhepri Fondation
A Ekuqaleni, amanzi amakhulu akha inqwaba yesiphithiphithi, isobho lakudala elaliqukethe ubuningi bazo zonke izinto. Lesi siga besiminyene futhi sihlangene kangangokuthi sasibukeka njengetshe elimnyama.
Ngaphezulu kwaleli qanda le-inert cosmic lashukumisa imisebe ye-cosmic eyayihamba ngokungaphezi ngaphezu kwamanzi angenakulinganiswa njenge-ultracentrifuge ejikeleza ngamandla angenakulinganiswa ajikelezayo, aqhekeka "etsheni elimnyama" okhiqiza inani elilinganayo lezinto ne-antimatter. Ngakho-ke isiphithiphithi sokuqala saqala ukuhlukanisa futhi sazihlela ngokwaso:
UNkulunkulu wahlukanisa umoya namanzi emhlabeni nomlilo.
Esibhakabhakeni, ukukhanya kwaphuma ebumnyameni sibonga ukuphindiselwa kwelanga, ngenkathi emhlabeni, kwavela, esiswini sikaNoun, isiqhingi sobumba. UMbumbi-uNkulunkulu waphinde walwakha lolu daka olushubile lwaba umsebenzi wobuciko oyiqiniso, wabe esehlala phansi wazindla ngendalo yakhe. Ebona ukuthi wayengaphelele, waphefumulela emakhaleni akhe i-Ka-Ba, umoya womphefumulo ukumletha empilweni.
Yile ndlela uNkulunkulu adale ngayo umuntu wokuqala ngomfanekiso wakhe. Wayengowesilisa nowesifazane bobabili.
Izinkinga Zobuntu - Alice Bailey (PDF)